12 Sano ee Naqshad Xirfadeed - NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
Hayso xalka adeegga dhowr sano ee astaanta caalamiga ah
Laga soo bilaabo HOUD oo la aasaasay, had iyo jeer noqo mid macmiil u jihaysan, ku adkeyso tayada sida xididka, hagaajinta & hal-abuurka si joogto ah, sanado badan ka dib shaqada adag ee shaqaalaha, shirkadda caalamiga ah ayaa ansixisa badeecadahayaga, sii wad kororka tirada laba lambar sanad walba.
Bixinta xalka & adeegga summad badan oo caalami ah oo hadda jira, oo loogu talagalay isku xiraha: State Grid Corporation ee Shiinaha, Eaton, Delta, HuaWei, Emerson, Philips, TCL iwm, qalabka korontada-acoustic: Bose, JBL/AKG, Sennheiser, Sony iwm .
Waxaan ka qayb qaadannaa naqshadda macmiilka, waxaan siinnaa aragti xirfadeed & waayo -aragnimo, dhanka kale jawaab firfircoon, hirgelinta xaqiijinta fikradaha kala duwan ee macmiilka, waxaan siinnaa badeecad tayo sare leh.
Nooca caanka ah ee warshadaha, patent30+, ganacsiga teknolojiyadda Hi-tech
Houd wuxuu bixiyaa xalka isku-xirka sare ee hadda jira iyo xalka qalabka korontada-acoustic, xushmee hantida caqliga, sidoo kale fiiro gaar ah u yeelo hal-abuurka teknolojiyadda cusub, iska diiwaangeli badeecadda badeecadaha laga soo aasaasay: ANEN, iyada oo loo marayo dhammaan shaqaalaha dadaalka badan, tobanaan sano soo koraya, macaamilku wuxuu si tartiib tartiib ah u ansixiyaa astaantayada , dalabka Awoodda UPS, xarunta xogta & server -ka, awoodda korontada, saldhigga isgaarsiinta, otomaatiga warshadaha, aaladda caafimaadka, qalabka korontada, tareenka tareenka, baabuurta & saadka, dekadda, difaaca hawada, macdanta, warshadaha acoustics & earphone. Illaa iyo hadda, shirkaddu waxay leedahay patent 40+, oo lagu sharfay shirkadda sayniska & teknolojiyadda Hi-tech. Iyada oo taageero weyn laga helayo macmiil ka socda warshado kala duwan, dhammaan shaqaaluhu waxay ahaan doonaan sidii had iyo jeer, hal -abuur joogto ah, falcelin duug ah & macmiil cusub naxariis weyn.
Warshadda waxay leedahay qalab wax -soo -saar oo horumarsan & aqoon isweydaarsiga casriyeynta, naqshadeynta & habaynta aaladda wax -soo -saarka.
Illaa iyo hadda, markaan horumarinayno, waxaan siinnaa xal taxane ah macaamiisha: Naqshadeynta-> Muunadaha (daabacaadda 3D)-> tijaabooyinka shaybaarka/xaqiijinta-> naqshadaynta aaladda-> horumarinta-> wax soo saarka ballaaran. Marka laga hadlayo habka socodsiinta, waxaan ku siin karnaa duritaan, shaabadayn, fidin, CNC, MIM iwm, waxay leeyihiin waayo-aragnimo hodan ku ah isku-xiraha hadda jira, terminal-ka saxda ah & qalabka korontada-acoustic. Shirkad leh aqoon isweydaarsiga dahaadhka korantada, waxaan kuu soo qaadan karnaa waayo -aragnimo ka fiican, waayo -aragnimo sannado badan u leh naqshadeynta badeecadda & soo -saarista astaanta qaaliga ah ee caalamiga ah.